Faroole Oo Tegay Buundada Sunijiif Ee Gobolka Nugaal Oo Ay Jareen Roobab Mahiigaan Ah * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faroole Oo Tegay Buundada Sunijiif Ee Gobolka Nugaal Oo Ay Jareen Roobab Mahiigaan Ah
Garowe, Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan, qaar ka mid xubnaha wasiirada maamulka iyo waxgarad ayaa maaanta booqday buundada Sunijiif oo 60-KM u jirta Garowe, islamarkaana ay ja raneen dadaad aan horay loo arag oo ka dhashay roobaab da’yayey laga soo bilaabo khamsiitii lasoo dhaafay.
Faroole iyo xubnaha la socday ayaa markii ay tageen buudada go’day wuxuu sheegay nin deegaanada Punland aya kala jarmeen oo la isu gudbi kareyn.
Faroole ayaa sheegay in dhibaatada ka dhalatay dadaadka jaray buundadaas ay awood ahaan ka weyn tahay maamulka Puntland.
“Wadanku waa kala go’an yahay, waana arrin ka xoog abdan Puntland in ay wax ka qabato, hase ahaatee inta awoodeena ah waan bilaabi doonnaa insha-Aalha” ayuu yiri Faroole.
“Waxaase xaqiiqo ah in wadadan xirnaansheheeda aan wax badan la sugi karin oo caqabad xoog leh ay la imaan karto oo ay ka mid tahay xaqa raashinka, isku socodka gaadiidka, xataa ganacsiga hakad baa ku iman kara, waa in sida ugu dhaqsaha badan arinta loo galaa bil gudeheedna lagu soo dhameeyaa” ayuu sidoo kale yiri Faroole oo buunadada jabtay kula hadlay warbaahinta.
Faroole ayaa dhanka kale ka hadlay dadkii ku waxyeeloobay deegaanada xeebta ah ee Puntland oo roobabh dufaan wata dad badan ku dileen, dad kalana weli la la’yahay.
Wuxuu sheegay Faroole in gurmadkii loo sameeyey dadkii dabayluhu asiibeen aysan wali gaarin dhulkoo dhiiao xirtay awageed oo gawaaridu aysan deegaamada geli Karin, wuxuuse xusay in gaari Dameero loogu qaadi doono kaalmada.
Sawiradda laga soo qaaday buundada Sunijiif ee jabtay ayaa biyo sida badda ah oo fadhiya dhul baaxad leh oo dhinacyada ka xiga wadada laamiga ah.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland, Cabdullaahi Jaamac Ilka-jiir oo saxaafadda la hadlay ayaa gaadiidka aada magaalooyinka Bosaso iyo Garowe inta u dhexeysa iyo waliba kuwa kale ku wargeliyey in ay joojiyaan safaradooda kadib markii ay go’day wadadii ay isticmaali jireen